के 2018 विश्व मुद्रा को परिचय एसडीआर क्रिप्टो मुद्रा संग जुडे को वर्ष को? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर Bitcoin, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 डिसेम्बर 2017 मा	• 11 टिप्पणिहरु
यस हप्तादेखि मैले फेसबुकमा 1988 बाट अर्थशास्त्री पत्रिकाको अगाडिको पृष्ठ प्रकाशित गरें। यसमा एक फीनिक्स चित्रण गरिएको छ जुन कागजको पैसा जलाइरहेको छ। सुनको सिक्का फिनिक्सको गर्दनको वरिपरि दृश्यात्मक छ, क्रिप्टो मुद्रा बिटकोइनको सम्झना। हामी यो सिक्कामा वर्ष 2018 हेर्नुहोस्ौं। अर्थशास्त्री एक प्रभावशाली ब्रिटिश क्लासिक उदार पत्रिका हो जुन साप्ताहिक प्रकाशित गरिएको छ। राय पत्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा ठूलो मात्रामा फोकस गरेको छ। यो कुलीन अभिजात वर्गका लागि इङ्ग्रेट पत्रिकाको रूपमा देखा पर्यो।
मेरो अघिल्लो लेख मैले बताएँ कि कसरी आईएमएफको विश्व स्तरको बिटकोइन, ईथरियम र अरु कति क्रिप्टो मुद्राहरू, चीनबाट सुरु भएको 2017 मा प्रस्तुत ब्लकचेन सूत्र मार्फत लिंक गरिनेछ। यो लाग््छ कि यो नयाँ विश्व मानक बन्न सक्छ जुन आईएमएफ को मुद्रा विशेष रुपैयाँ अधिकार (एसडीआर) बनाउन को लागी डलर (र यूरो, ब्रिटिश पाउन्ड, आदि) को स्थान ले। यसको अलावा, क्रिप्टो मुद्रा डिजिटल पैसाको लागि नयाँ मानक देखिन्छ र शायद नगद पैसा सम्भवतः गायब हुनेछ।
मौजूदा मुद्राहरु पहिले नै आईएमएफ मार्फत एसडीआर मा जोडिएको छ। क्रिप्टो मुद्रा अब ग्लोबल वित्तीय प्रणालीबाट भाग्न सक्षम देखिन्छ जस्तो लाग्छ, तर केहि पनि छैन जस्तो देखिन्छ। त्यस अघिल्लो लेखमा मैले वर्णन गरे कि एसडीआर संग लिङ्क एगहैन मार्फत कसरी देखिन्छ। तलको भिडियो ACCHain द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो र धेरै खुलासा छैन। तपाईं पनि फीनिक्स यहाँ देखा पर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी यो 1988 बाट अर्थशास्त्रीको अगाडिको पृष्ठमा राख्नुभयो भने, 2018 राम्रो 'द' वर्ष हुन सक्छ जसमा हामी विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको रिसेटको अनुभव गर्नेछौं। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
केही विश्लेषकहरूले आशा गर्छन् कि मानिसहरूलाई क्रिटोटो मुद्रामा तिरस्कार गर्न संकट चाहिन्छ। (पेट्रो) डलर को उत्तीर्ण धीरे तोडने लग रहेको छ किनभने सऊदी अरब ले पहिले नै चीन संग एक तेल सम्झौता मा हस्ताक्षर गरेको छ, चीनी युआन खरिद गर्न सकिन्छ र यो युआन सउदहरुको लागि सँधै कन्वर्ट हुने हुनेछ। अमेरिकामा सुरु हुने एक संकटले असम्भव प्रतीत गर्दैन, जुन अहिले चीन र अमेरिकाका वफादारी सहयोगी सऊदी अरबले डलर कम छ। यो सम्भव छ कि अमेरिकाको अशुद्ध आकाश-उच्च ऋण डलरको शक्तिको साथमा संयुक्त संयुक्त एक वैश्विक संकटको कारण हुन सक्छ। यो विश्लेषक लिनेट जङ्ग (आईटीएम ट्रेडिंगमा मुख्य बजार विश्लेषक) र फदद कवासामीले भिडियोमा बताउनुभएको छ। तिनीहरू पनि भन्छन् कि ACChain क्रिप्टो मुद्रा र एसडीआर बीच लिङ्क स्थापना गर्नेछ। के यो योजना बनाई संकट हुन सक्छ?
यी विश्लेषकहरूको सल्लाह सुनमा तपाईंको पैसा लगानी गर्नु हो, किनकि सुन एक वस्तु हो जुन सधैँ एक रिजर्भ हुनेछ र आईएमएफ कहिले काँहीमा पराजित हुने छैन। यसैले यो सधैँ यसको मूल्यलाई उनीहरूको आदर्श वाक्य बनाइनेछ। यद्यपि, प्रश्न यो वास्तवमा यो मामला हो कि छैन। सबै पछि, के हुन्छ भने सुन प्रमाणपत्रहरू ACChain लाई केवल एक ब्लकचिन सम्पत्तिमा बदले गरेर लिंक गरिएको छ? तपाईले यो अनुमान लगाईयो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा, त्यहाँ वास्तवमा फीनिक्सको पकडबाट बचाउने छैन। समेत "सुरक्षित" कीमती धातुहरूसँग पनि होइन। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)।
म अनुमानित छैन कि एक वित्तीय संकट आउनेछ कि भविष्यवाणी। तथापि, मलाई संदेह छ कि 2018 वर्ष हुनेछ जुन क्रिप्टो मुद्रा (एगह्यान लिङ्क मार्फत) आईएमएफको नियन्त्रणमा आउनेछ। वास्तवमा, त्यो प्रक्रिया ACCNain को परिचय संग 2017 मा पहिले नै सुरू भएको छ। यसैले हामी सम्पूर्ण संसारको डिजिटाइजेसन तिर जान्छौं र यो सुखद आशा होइन। नगद को लागी दोषी ठहराएको छ कि कालो पैसा संग धोएको सेतो हो। यो पनि दबाइहरु र डकैती को जोखिम को परिणाम को रूप मा तेजी देखि लेबल को रूप मा लेबल गरिनेछ। हामी पनि उच्च लागत को लागी नगद भुक्तानीहरु संग प्रस्तुत गर्न को लागी, सस्ता डिजिटल लेनदेन बनाउन को आशा गर्न सक्छ। त्यो क्रिप्टो मुद्राले पुरानो मुद्राको स्थान लिनेछ जुन तुरुन्तै आवश्यक पर्दैन। हामीले के देखिरहेका छौं कि डलर र यूरो दुवै (र संसारका सबै अन्य मुद्राहरू) खातामा एक नम्बर भन्दा धेरै बढी छैन। एकमात्र भिन्नता यो हो कि तपाई अझै पनि ATM बाट नोटहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सम्भवतः अविलम्बन गरिनेछ (खर्च लागू गरेर)। वास्तवमा, दुवै मौजूदा मुद्राहरु र क्रिटोक्रोमेन्ट पहिले एसडीआर संग जुडे भएका छन्, जसको अर्थ छ कि आईएमएफ तार खींच रहेको छ।
क्रिप्टो मुद्रामा पानाले अवस्थित बैंकिंग प्रणालीको पतनको परिणाम हुन सक्छ। के यो 2018 को लागी अपेक्षा गरिएको छ? यो कफी आधारहरू हेर्न जारी छ। क्रिप्टहरू सम्भवतया मात्र सुरक्षित सुरक्षित हो। सुन र चाँदी अब पनि यो तरिका देखिन्छ, तर यदि तिनीहरू ACCHain को सम्पत्ति blockchain अन्तर्गत ल्याइएका छन्, तिनीहरू IMF को नियन्त्रणमा पनि छन्। यसबाहेक, तपाईं सम्भावनालाई शासन गर्न सक्नुहुन्न कि बैंकहरू मात्र सोच्दै छन् कि उनीहरूलाई सर्टिफिकेट्समा जमानत गर्नु पर्छ र शारीरिक सुन (जसको ग्राहक मात्र प्रमाणपत्र छ) मात्र मात्र खर्च गर्दैन (यो साइज)।
यो फिनिक्स अर्थशास्त्रीको 1988 को पृष्ठमा रहेको छ र ACChain भिडियो क्लिपमा, म पछिको आलेखमा कुरा गर्नेछु।
स्रोत लिङ्क सूची: गोल्डसिलभर.कॉम
ट्याग: A-SDR, acc, एचेन, Bitcoin, ethereum, विशेष, IMF, अर्थशास्त्री
12 डिसेम्बर 2017 मा 14: 38
2018 बिटस्किन युग?
यदि यो सत्य हो भने, धनीले अन्य सम्पत्तिहरू जस्तै अचल सम्पत्तिको भाग लिनेछ (यदि अघिल्लो वर्षमा यो गरेनन?) चाँदी सँधै राम्रो हुन्छ किनकि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक रूपमा धातु प्रयोग गरिन्छ।
यदि यो सही छैन भने बिटकोइन्सहरू परिवर्तन गर्न एक ठूलो चाल हो जसले धनीले आफ्नो जेबमा साधारण मुद्रामा लामो छ।
दुवै अवस्थामा, सामान्य पुरुष र स्त्री (र ट्रांसगेंडर व्यक्ति होइन) सक्षम हुनेछ र पछाडि पनि फिर्ता आउन सक्छ। त्रिभुज र बहुभुज विनिमय सम्भव छ। ट्यूटोरिंग, भाषा पाठ, गृहनीकरण, नौकरानी र कार कपडा मरम्मत आदि माध्यमबाट सुन्दरता विरुद्ध प्लम्बर।
12 डिसेम्बर 2017 मा 16: 53
चाँदी र सुन केवल एक चीज हो यदि तपाईले उनीहरु लाई आफ्नो आर्टिकमा शारीरिक रुपमा लिनु भएको छ। तर एक संकटमा तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुपर्दछ कि यो मूल्यवान धातुहरू किन्न वा बिक्री गर्न मनाही छ।
यसको अतिरिक्त, यो केहि मान्छे को लागि केवल दिलचस्प छ कि केहि अतिरिक्त। औसत जनवरी मा पालतू भेटिएको छ सबै बचत गर्न को लागी कुनै पैसा बाँकी छैन र बिल तिर्न कठिन छ।
12 डिसेम्बर 2017 मा 17: 23
मैले हडताल गरेँ कि संयुक्त राष्ट्रले यसलाई स्वीकार्य बनाउन कसरी प्रयोग गरिन्छ, एआई को सन्दर्भमा विकास सहित। संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, बीआईएस, नाटो, आदि सबै NWO को निर्माण ब्लक हुन्। तिनीहरू भेडाको भेडालाई एक दिशामा डोऱ्याउने प्रयास गर्नुहोस् ...
12 डिसेम्बर 2017 मा 17: 34
इथेरियम ब्लकचेन को सफलतापूर्वक प्रयोग गरे पछि पाकिस्तानी रूपहरु को यस वर्ष पहिले 100 मान्छे को हस्तांतरित गर्न को लागि, संयुक्त राष्ट्र को विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को अतिरिक्त सुरक्षा को व्यवस्था को लागि यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि उनको सुरक्षित कार्य को अर्को चरण को निष्पादित गर्नुहोस।
12 डिसेम्बर 2017 मा 21: 18
"त्यसोभए, यदि हामी बाहिर निस्कन सक्छौं हामी पैसा फिर्ताको अन्त-अन्त ट्र्याकिङ प्रस्ताव गर्न सक्छौं र बाहिर जान्छौं, जहाँ यो खर्च भएको थियो, यो कस्तो तरिकाले खर्च भएको थियो जुन गोपनीयताको अन्तर्वार्तामा घुमाउँदैन। लाभार्थी। "
एक तरिका मा कि गोपनीयता मा हस्तक्षेप गर्दैन ... हाँ ठीक छ
12 डिसेम्बर 2017 मा 22: 14
के Futurism को सम्पादक-इन-चीफ अब त्यो वा एक वा त्यो हो?
13 डिसेम्बर 2017 मा 20: 37
हाहाहा हाँ यिद, हेमफेरोडाइट देखि एन्ड्रोइड सम्म .. त्यो उत्सव को पुनर्निर्माण संकुल ले लिया छ। 😀
14 डिसेम्बर 2017 मा 00: 03
म पूर्वनिर्धारित विकल्पको बारेमा बढी सोचिरहेको छु
14 डिसेम्बर 2017 मा 07: 04
आह डा। मेन्जेले विकल्प, तपाईले प्लास्टरकिलाई सोध्नुपर्छ ..
13 डिसेम्बर 2017 मा 20: 45
सबै वेब क्यारेक्टर सम्पादकहरू र अरू स्टैसी कर्मचारीहरूले एआईएसडीको क्रिसमस पहेलीमा भाग लिन्छन् ... कसलाई थाहा छ तपाइँलाई पदोन्नति प्राप्त गर्नुहोस् who
16 डिसेम्बर 2017 मा 00: 06
« कसरी बिटकुइन र अन्यहरू ACChain मार्फत IMF विशेष आरेखण अधिकार (एसडीआर) सँग जोडिएको छ
किनकि ट्रान्सले उत्तर कोरियामा आगोमा तेल ल्याउँदछ, यरूशलेम र वेनेजुएला, शक्ति पूर्व तिर फर्काउँछ »
कुल भ्रमण: 4.135.283